Long gone izinsuku lapho izibani incandescent kuphela esetshenziselwa ukukhanyisa, edume ngokuthi "ama-globe kagesi Ilyich". Namuhla, noma yimuphi umnyango izimpahla zikagesi, ngaphezu "zabuna", ungabona omningi kwagezi, Halogen futhi LED izibani ngamandla ezahlukene kanye nosayizi, ukuma flasks kanye cartridges.
Ngempumelelo kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo mikhiqizo kuyakhuthaza ngempela, kodwa ukuphila service namanje kushiya okuningi okufanele oyifunayo. Ngakho-ke, umbuzo wokuthi kungani isibani liphele, ukuhlobana kanye akaphelelwa.
Ngaphezu izici zangaphandle, ezifana okuyiphutha wiring voltage amathonsi, nokunye, ethinta ngokuqondile ukuphila izibani zidlala indima ebalulekile futhi ubuchwepheshe zenziwa lapho. Iqiniso lokuthi algorithm lwezinhlobo ezahlukene ezahlukene izibani, okuholela kwempilo yako yokusebenza. Lapho ukhetha ukukhanyisa okokuqala ledzingekako zonke ukuba banake izici lobuchwepheshe, ukuqonda kahle kanjani futhi isikhathi eside izosebenza ngesinye isikhathi umthombo wokukhanya.
Le mikhiqizo ekhiqizwa ngesimo ingilazi uphawu flasks egcwele igesi inert noma cleaner. Igabha yafakwa tungsten Kuvunguza okuyinto, ngaphansi kwethonya nakalivayas kagesi likhipha ukukhanya nokushisa. okukhipha ukukhanya futhi ukuphila inkonzo izibani incandescent kuxhomeke esishubile lokushisa Kuvunguza.
Njengoba izinga lokushisa kwandisa ukwanda ukukhanya, kodwa tungsten ngoba iyasha ngokushesha, wakha phezu engaphakathi enamathela igabha esibukweni. Ngenxa yalokhu, amandla yokucucuza elikhanyayo incipha. Ngokuhamba kwesikhathi, tungsten Kuvunguza isiba izacile futhi yancibilika ngesikhathi esithile isikhundla obucayi kakhulu. Yingakho isibani liphele. Impilo isilinganiso ngesibani esikhipha ngema-awa lange-1000.
Umgomo we operation yalolu hlobo ugesi akahlukile ekusebenzeni izibani incandescent. Umehluko amanga kuphela khona nengcosana Halogen (chlorine, i-iodine uxhumano lokudlulisa, fluorine) ku igesi yamathebhu, okuyinto ukuvimbela fogging igabha. Tungsten ahwamuka Kuvunguza ushukumiseleka ukuba izindonga umfuma, lapho izinga lokushisa ephansi, ukwedlula mayelana Helix. Kukhona-ke engena ukuxhumana Halogen futhi ekhuthaza Halogen of tungsten is yaphindela esikhipha Kuvunguza, lapho amakhefu. Le nqubo kusiza ukubuyisela ingxenye tungsten lapho lezi izibani ingathatha amahora mayelana 4000.
Isizathu kuphela kungani lolu hlobo ngokuvamile zishe ama, futhi entsha, kuyinto lokungalandeli umthetho yokumiswa yabo. Iqiniso ukuthi iminwe uthinte ebusweni isibani is hhayi Kunconywa. Kwesobunxele adipose isigxivizo Bhaka ku ingilazi, kuphakamisa kumiswa imifantu futhi ngaphambi kwesikhathi ukwehluleka isibani. Setha Halogen Isibani nge Ukugoqa ifilimu noma izindwangu ezomile ahlanzekile. Uma le yezicathulo namanje kwesokunxele, kufanele kube kahle lisuswe.
Kwagezi (Fluorescent compact) izibani
Igabha izibani ezifana ahlelwe tungsten electrode, camera nenye oxides calcium, barium yombala futhi Sesithombe. i igesi engaxubani namakhemikhali kokuncinyane mercury umusi isetshenziswa njengoba yamathebhu. Ebusweni engaphakathi isibani camera phosphor. Lokhu kwaziswa ekhethekile iguqula imisebe ultraviolet ekhiqizwa bedle ukucindezeleka ekukhanyeni abavamile.
Lezi izibani abe ukusetshenziswa ubuncane amandla, ukusebenza kahle, ukuthembeka kanye nokuphila isikhathi eside service amahora 8000. Ngaphambi kokufika LED ukukhanyisa amadivayisi kulondolozwa lavuselelwa omkhulu phakathi abathengi. Nakuba abaningi futhi kwaphakamisa umbuzo ka kungani ama zishe ngokushesha endlini uma zenzelwe ukuphila isikhathi eside. Futhi lokhu kungenxa yokuthi lezi amadivaysi ngeke akwazi ukubekezelela njalo uvule / uvale. Ngamanye amazwi, lo nzima umnikazi uzama ukulondoloza amandla futhi isibani wokuphila, ngokushesha ke iphuka. Esinye isizathu esenza kwagezi light isibani liphele, kukhona yonke yeminwe efanayo kwesokunxele ngumsebenzisi uma screwed.
Le mithombo luminaires ukukhanya kukhona LED. izibani onjalo awube ama ingilazi noma esikhipha kwayo. Sinenkosi eziningi eziwusizo obungenakuphikwa, ezingenakho okokukhetha, okuyilezi:
ongaphakeme energy ukusetshenziswa;
yokuntuleka umphumela Ukushisa ngesikhatsi operation;
ukuphila olunzulu abasebenza (amahora 25, 000 000-100);
Khetha cartridges standard;
kwemvelo (ukuklama engenazo izithako ezilimazayo noma eziyingozi);
ukumelana okushisa aphansi;
khona bohlu ngemisebe, eseduze kulowo yemvelo;
asikho isidingo voltages okusezingeni eliphezulu.
esaphila enkulu ukukhanyisa ngenxa yokuthi intambo abanalo, Ngakho-ke, akukho lutho zishe. Kodwa, ngeshwa, ezingahlali phakade. Ngakho kungani Shisa LED isibani? Lokhu kuchazwe iqiniso lokuthi imikhiqizo efana akhiqizwa ngaphansi ubuchwepheshe lula kakhulu, okubandakanya ukusetshenziswa Converter okulula isikebhe sizinze, ngenkathi operation eside anganikeza adaptha umnyuziki electronic.
Okwamanje ukuthungela isibani isikebhe sizinze inverter akakwazi ukuba abhekane ngokuphumelelayo nesitha roll enamandla zamanje, wasidlulisela kuya LED. Ngenxa yalezi isibhamu zinhlayiya elithatha phosphor yabo ubhujiswe ngokushesha. Njengoba sazi ukuthi zamanje ukalwe kungaba idlule Inkomba oyifunayo izikhathi 1.5, kulula ukuqonda ukuthi kungani LED isibani liphele.
iziphi izici zangaphandle ezithinta ukuphila ukukhanyisa zalapho
Yiqiniso, imithetho wokusebenza, ikhwalithi yokuphila zokusebenza uhlobo izibani ngamunye zihlobene ngokuqondile ekuphileni kwabo inkonzo. Nokho, kukhona izinto eziningi zangaphandle ezithinta isikhathi "ukuphila" yokukhanyisa zalapho. Okuvame kakhulu izici ezingezinhle zangaphandle, kungenzeka, isibonelo, zihlanganisa amandla okhuphuka, eziphuthumayo wiring, ukushintshwa okuyiphutha, cartridges, nokunye. D. Lapha sibheka ukuthi kungani ngokuvamile zishe isibani ku Iqhwa futhi yiziphi izindlela ekuxazululeni le nkinga.
Ngeshwa, izinga voltage kule lwasekhaya ugesi ekude kakhulu ekahle. Ngenxa iyehla iyenyuka njalo uqine kungapheli nje ama-globe kagesi, kodwa futhi zasendlini. voltage High - kuyinto yisizathu esivame kakhulu esenza zishe isibani ku Iqhwa. Isikhathi esining impela yilesi isibani. Ilondolozwe kulokhu kuhlupheka izindlela ezimbili lokukhetha isibani kwesokudla nokusimamisa voltage.
Iningi ngokuvamile ezitolo zingatholakala esikhipha ibalwa ngaphansi kwamandla 220-230 V Uma kukhona yokwanda kwama njalo Kunconywa ukubheka volt izibani 230-240. Enye okukhipha uzobe esikhundleni incandescent amalambu namadivayisi e-fluorescent, kukhuphuke ukungezwani ayiphazamiseki. Ikhambi ekahle ukufaka zinamandla Regulator imodeli efanelekayo. Le divayisi ukukusindisa nokutubeka, hhayi kuphela isibani kodwa futhi zasendlini.
Uma unesithakazelo, kungani zishe light isibani ku lwemidlalo esifanayo, le nkinga cishe itholakala igobolondo. Uma kuba Ceramic, kwanele nje ukuze kuhlanzwe oxhumana. Kodwa iningi cartridges zenziwa epulasitiki engesiyo izinga okusezingeni eliphezulu ngaso sonke isikhathi. imikhiqizo enjalo zenzelwe ngaphansi kwesibani, okuyinto amandla ingeqi 40 Watts. Uma izipikili isibani ngaphezulu amandla, igobolondo plastic uzoshesha uqale ukwambula, kanye oxhumana uyozishisa. Ngenxa yalokho, isibani iba ngaphezulu efudumele futhi ekugcineni zishe.
Ezilimele plastic igobolondo kumele zithathelwe indawo, imodeli okungcono sobumba.
oxhumana yokushiswa inkinobho ingabagulisa njalo nokutubeka ama. Kulokhu-ke kuyadingeka ukuba ukuqaqa futhi ususe inkinobho, ukuhlanza bonke oxhumana nabo futhi abenzele ukuxhumana okuphephile. Uma inkinobho ivuliwe, kukhona ukukhubazeka sobala ngesimo ukugelelza ngesikhathi ukuxhumana contact, kungcono esikhundleni. Esikhundleni inkinobho evamile ungabeka dimmer, okuyinto eyenza ukuba ulungise ukukhanya ukukhanya, kuyilapho evikela isibani kusukela voltage okhuphuka ngokungazelelwe.
izibani zikagesi ezinde Okuxekethile, ukuxhumana okuxekethile iphaneli izindlu noma lebhokisi lokuxhuma izintambo - konke lokhu kuzothinta impilo inkonzo hhayi kuphela isibani kodwa futhi lonke nobunjiniyela bukagesi e efulethini. Siza ukuzigwema audit zesikhathi bonke oxhumana nabo. ngokukhethekile kufanele inikwe aluminium oxhumana nabo, ngenxa umsungulo we metal bona angesabi attenuated.
Emoyeni Coolers. Umgomo we operation, ukubuyekezwa
Ukunamathela grinder ngoba juicing: indlela yokusebenzisa
Penda for izindonga futhi Uphahla lwangaphakathi: odinga ukukwazi lapho ekhetha
MC-140-500, radiators, waphonsa yensimbi: Izici, Isibuyekezo, imibono kanye nokubuyekeza
Potentiometer - kuba umkhiqizo?
Indlela ukunciphisa umzimba enyangeni edlule ngesikhathi 7 kg: imenyu, ukudla kanye nezincomo
Isibonakaliso soMsindisi we-Holy Face - esindisa ukulandelana kwamandulo
Origami izingane iminyaka 4-5: izikimu nemibono
Lapho yokuthengisa ebusika baqale futhi ungazitholaphi ukulondoloza?
Izimbali eustoma: incazelo, ukutshalwa, ukunakekelwa
Umlando lwamaSlav lasendulo
Voronezh State Academy of Arts: ikheli, izimo yokwemukela, amandla
"Tula" metro station. Zibonisa ingqalasizinda phansi ezisekelwe